IHuff kunye neHuffington | Martech Zone
IHuff kunye neHuffington
NgoMvulo, Aprili 18, 2011 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 Douglas Karr
Ukuba ubungazange uve, kukho Isityholo se- $ 105 yezigidi ngokuchasene no-Arianna Huffington ngokuthengisa kwi-AOL kodwa engaboneleli ngentlawulo kwiibhlogi ezincedileyo ekuphuhliseni i-Huffington Post kwindawo enamandla yokubhloga. Ndiza kweqa isigqebelo sesityebi esenza ikota yezigidigidi zeedola kumqolo wabanye (ewe!)… Kwaye uye ngqo kwinqanaba.
Njengomntu oneeblogi ezingaphezu kwama-50 ezibhloga rhoqo apha Martech Zone, Ngokupheleleyo vumelana nebhlog ezingabhatalwanga. Bafanele ukufumana imbuyekezo.
Martech Zone Uwisa imali ethile kwinkxaso mali kunye nentengiso, kodwa siyaqhubeka nokufaka kwakhona ezo mali kurhwebo, uyilo, kunye nokwandisa Podcasting, imeyile kunye yokuzonwabisa. Siyaqhubeka nokuphucula isantya sendawo kunye nozinzo. Ke… ukuba ukubala konke, sisasebenza ngelahleko.
Kwaye ndiyithanda ngokunyanisekileyo ngaloo ndlela kwaye ndiza kuqhubeka nokusebenza ilahleko okoko umxholo wethu uphucula kwaye siyaqhubeka nokukhulisa ukufunda kwethu. Akukho namnye kubabhali bethu okhe wacebisa ukuba ndenze nantoni na eyahlukileyo. Ndiyakholelwa ukuba bayakuxabisa ukubonwa kunye nethuba lokubhala ngeyona ngcali intengiso emhlabeni.
Oko kwathethi, andicingi ukuba ngumcimbi onzima kakhulu. UArianna Huffington kunye neqela lakhe banokusebenzisa ngokulula kubahlalutyi kwaye ndachonga iibhlog eziqhube elona xabiso (ngokusebenzisa ukugcwala kwabantu) kwindawo leyo. Kananjalo banokuphuhlisa uhlalutyo lweendleko ezibalulekileyo kwintengiso, kwintengiso, nakwizibonelelo zotyalo-mali abazenzileyo. Ekugqibeleni, ndiyakholelwa ukuba iposti yeHuffington ikwenzile oko, ngewayethethathethane ngesinqum esihle sotshintsho kwiibhlog zakhe ezazibonelela ngexabiso.
Oko bekuthethile, uArianna ngoku unekota yeebhiliyoni zeedola ukuze azalise imali kukhuseleko olukhulu… ekungayi kubakho mfuneko yakwenza ngaphezulu kokukhomba kwimigaqo yenkonzo wonke umntu avumayo xa ebhalisa. IForbes iyavuma ukuba yifayile ye- ubude obude.
Inyaniso, kunjalo, kukuba ikhona akukho ndlela enokuphumelela ngayo ityala. Ukuba iyayenza, onke amalungu e-Facebook ayakutyalwa imali, zonke iziphumo zokukhangela kuGoogle ziya kutyalwa ngokuhlawulwa ngokucofa nganye, kwaye zonke iitwitter zinokuxabisa iisenti ezimbalwa kwi-tweeter -kuqhuba zonke ezi nkampani ngaphandle Leshishini. Ayizukwenzeka. Ngamanye amaxesha ubomi abunabulungisa - eli lelinye lala maxesha.
Ndikhuthaza lonke ishishini ukuba liphume kwezi khulula amaqonga kwaye uqale u nelayo umxholo wabo. Ukuba unetalente ngokwaneleyo ukuba ubhale umxholo otsala abaphulaphuli, kutheni kwihlabathi unganikezela ngomntu ofana noHuffington? Sukwenza oko! Khangela kwaye usebenze umxholo wakho kumvuzo. Yenza iposti yeendwendwe apha naphaya ngenjongo yokubuyisa ukugcwala kwabantu kwindawo yakho. Kungenxa yoko le nto sisebenza nzima ukubonisa ngokucacileyo ababhali bethu kwi-footers nakwicala elisecaleni.
Ewe, ukuba i-AOL ingathanda ukuthenga Martech Zone i $ 250 yezigidi (okanye i-25 yezigidi zeedola), ndingavuya ukwahlula iidola ngabo banike elona xabiso liphezulu kule ndawo. Umxholo awunaxabiso ngaphandle kokuba uzisa iindwendwe. UArianna Huffington bekufanele ukuba ulibonile ixabiso elaye laziswa ngabanye beebhlog zakhe.
Ukukhawulezisa iWindowsPress ngeAmazon kunye neW3 iyonke iCache